Azonao atao izao ny misintona sary miisa 32 MIUI 8 amin'ny Android | Androidsis
Xiaomi dia iray amin'ireo orinasa finday avo lenta sinoa tadiavinay indrindra (manokana, ilay tena tianay indrindra). Amin'ny ambaratonga hatsarana, misongadina indrindra izy amin'ny famaranana lehibe izay mihatra amin'ny terminal-ny, fa koa noho ny tsy famerana ny tenany amin'ny fampiharana ny rafitra fiasa Android raha tsy misy bebe kokoa.
Avy amin'i Xiaomi dia te hanome ny toetrany ho an'ny terminal-ny koa izy ireo avy ao anatiny, ary izany no antony namoronany ny MIUI, sosona fananganana manokana ny hatsarana lehibe izay nivoatra tamina fomba mitovy amin'ny Android. MIUI 8 dia tonga hanome izany mikasika ny Android 6.0 Marshmallow ary nampiditra sary miavaka izay azonao sintonina amin'ny findainao.
Wallpaper 32 izay hanavao ny endrik'ilay finday avo lenta
MIUI dia nizara tamin'ny alàlan'ny bilaogy ofisialy fanangonana sary voafantina voafantina izay mamorona ity MIUI kinova fahavalo ity hahafahanao misintona azy ireo amin'ny fitaovanao. Raha fintinina dia Sary lamba fanidiana 29 sy sary miendrika birao telo hafao.
Izy rehetra dia voafintina ao anaty fisie ZIP satria efa nozaraina amin'ny famahana tanteraka, 2880 x 2560 megapixels.
Raha reraka amin'ny sary an-tsary mahazatra ianao ary te hiova, na raha tianao ny hatsarana MIUI nefa tsy manana finday finday avy amin'i Xiaomi, dia azonao atao izao ny manararaotra ary manangona fanangonana tsara ho hitanao. sary sokajy misy karazany roa. Etsy andaniny, saro-takarina, miaraka amin'ny gradients, loko fisaka ary ny fomban'ny minimalist, ary etsy ankilany, ny sary an-tsary zaridaina, tena mahavariana.
By ny lalana Raha tsy Android ny terminal-nao, azonao atao ihany koa ny misintona sy mametraka ireto rindrambaiko ireto. Ary amin'ny pejy fisintomana, dia ho hitanao ihany koa ireo sary mombamomba ny kinova MIUI teo aloha. Mandrosoa, manana vola ianao hamenoana anao.
Azonao atao ny misintona ireo sary mihetsika MIUI 8 maimaim-poana eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Afaka misintona sary miisa 32 MIUI 8 amin'ny Android ianao izao
Fahombiazan'i Tigerball ary fizika zavatra mahafinaritra ary mahafinaritra